काठमाडौं ९ को चुनाव- जितेपनि हारेपनि ह्याट्रिक
कात्तिक २४, २०७४
काठमाडौं, २४ असोज – मुलुकभर चुनावी सरगर्मी तातिरहेका बेला काठमाडौंको ९ नम्बर क्षेत्रमा भने चुनावी प्रचार प्रसार अन्य ठाउको तुलनामा सामान्य देखिएको छ । यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाका लागि वामगठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका नेकपा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कांग्रेसका उम्मेदवार ध्यान गोविन्द रञ्जित घरदैलो र प्रचारको तालिका बनाइरहेका छन् ।
तर विवेकशील साझा पार्टीले भने घरदैलो अभियान थालिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विवेकशील साझाको चर्चा काठमाडौं – ९ का जनतामा भने पुगिसकेको छैन् । विवेकशीलका तर्फबाट मिलन पाण्डे उम्मेदवार छन् ।
चुनाव प्रसारका लागि कांग्रेस, एमालेले कार्यालय खोलेर कार्यकर्ता भेलामा जुटेका छन् । कांग्रेसका तर्फबाट काठमाडौं – ९ को प्रचारको तयारीमा जुटेका कांग्रेस कार्यकर्ता सुर्वण थापाले भोलिदेखि प्रचार थालिने बताए । ‘हामी अहिले योजना बनाइरहेका छौं, कसरी प्रभावकारी रुपमा घरदैलो अभियान थाल्न सकिन्छ भनेर छलफलमा जुटेका छौं, घरदैलो अभियान थालेपछि चुनावसम्मै अभियान चलिरहन्छ ।’, थापाले लोकान्तरसंग भने ।
वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका उम्मेदवार कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भने प्रचारअघि नै व्यक्तिगत भेटघाटमा जुटिसकेका छन् । श्रेष्ठले व्यक्तिगत रुपमा चिनेजानेकासँग भोट माग्दै गर्दा वाम गठबन्धन निकट कार्यकर्ताले भने चुनावी प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन तहगत प्रसार समिति निर्माण गरिरहेका छन् ।
प्रचार प्रसार समितिका संयोजक अनन्त सिग्देलले वाम गठबन्धनले पर्सी २६ गतेबाट चुनावी प्रसार थालिने बताए । ‘हामीले नागार्जुन नगरपालिकाको वडा ८ बाट प्रसार थाल्ने योजना बनाएका छौं, त्यसपछि निरन्तर रुपमा सक्रिय हुन्छौं ।’, सिग्देलले लोकान्तरलाई बताए ।
नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धन छुट्टा छुट्टै रुपमा चुनावी प्रचारमा उत्रिए पनि यी दुवैको शैली लगभग एकनासको र एकैपटक हुने देखिएको छ । दुवैले एउटै खाले चुनावी शैली र योजना बनाएका छन् भने काठमाडौं – ९ मा दुवै नेताले आफ्नो जीतको दाबी गरिरहेका छन् । तर चुनावको रौनक छाएको बेला आम जनतामा चुनावले खासै प्रभाव भने पारेको छैन ।
विवेकशील साझाका उम्मेदवार प्रचारमा जुटे
नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनले चुनावी प्रसारको योजना तयार पारिरहँदा विवेकशील साझा पार्टीका सदस्य भने चुनावी प्रचारमा उत्रिसकेका छन् । काठमाडौं – ९ मा विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका मिलन पाण्डे सक्रियताका साथ प्रचारमा लागेका छन् । नागार्जुन, सीतापाइला क्षेत्रका जनतासँग भोट माग्दै गरेका विवेकशील साझा पार्टीका मिलन निरौलाले आफूहरुले जनतालाई परिवर्तनका लागि भोट दिन आग्रह गरेको बताए ।
‘हामी बिहानैदेखि प्रचारमा छौं, र आज सकभर धेरै क्षेत्र भ्याउने उद्देश्यले बेलुकासम्म नै प्रचारमा लाग्नेछौं’, निरौलाले भने, ‘हामीले पर्चा र भेटघाटको माध्यमबाट जनतालाई बुझाउन खोजिरहेका छौं, भेट्न नपाएका जनताको घरमा पर्चा छोडेर आएका छौं ।’ उनीहरुले बाजागाजासहितको प्रचार शैली भने अपनाएका थिएनन् ।
चुनावबारे जनता अझै अलमल
काठमाडौं – ९ का जनतालाई भने अझैसम्म चुनावले छोएको छैन । ठूला दलले घरदैलो अभियान शुरु नगरिसकेको तर साना दलले थाले पनि त्यसको प्रभाव पूर्णतः नपरेको मतदातामा देखिएको छ ।
काठमाडौं सीतापाइलाका राजीव श्रेष्ठले कुनै दल पनि भोट माग्न नआएको बताए । ‘चुनाव लागेको समाचार त सुनिन्छ तर हामीकहाँ अझै भोट माग्न आएका छैनन्’, उनले भने, ‘भोट माग्न आउनेमध्ये जसको विश्वास लाग्छ, उसैलाई दिनुपर्ला ।’
चुनावबारे बुझेका जनताले पनि यसपटकको चुनावप्रति खासै रुचि देखाएका छैनन् ।
नागार्जुन नगरपालिका, वडा नं. ५ का हितमान तामाङले आफूलाई चुनावमा खासै रुचि नभएको बताए । आफू कति नं. क्षेत्रमा भोट हाल्दैछु भन्ने पनि उनले थाहा नभएको बताए । ‘पहिले पनि भोट हालेको हो, केही फरक परेन, मलाई त भोट हाल्न मन छैन ।’, उनले भने ।
जागरुक र राजनीतिप्रति रुचि राख्ने जनता भने चुनावप्रति चासो देखाएका छन् । नैकापकी सुशीला पोखरेलले राम्रो उम्मेदवार चुनेर मत हाल्ने बताइन् । ‘हामीले राम्रो उम्मेदवार चुन्ने हो, जुनै पार्टीको भए पनि फरक पर्दैन ।’, उनले भनिन् ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा केही जनतालाई चुनाव हुने मितिमै अन्यौलता देखिएको छ । तर उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई चुनावी रन्कोले गाँजेको छ ।
केही जनताले पुरानै पार्टीलाई भोट दिनेमा रुचि देखाएका छन् भने केही जनताले विकल्पको खोजी गरेका छन् । कसलाई भोट हाल्ने भन्नेमा काठमाडौं – ९ का जनता अझै पनि अलमलमै देखिन्छन् भने केहीले राम्रा उम्मेदवार चुनिसकेको बताउँछन् ।
ध्यान गोविन्द कि कृष्णगोपाल ?
संविधानसभाका दुइवटा निर्वाचनमा कांग्रेसका ध्यानगोविन्द रञ्जित विजयी भएका थिए । २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा त्रिपक्षीय प्रतिष्पर्धामा रञ्जित विजयी भएका थिए । रञ्जितले १२ हजार ५ सय १ मत पाउँदा माओवादीका माइला लामाले १२ हजार २ सय ९२ मत पाएका थिए । यस्तै एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले १२ हजार १ सय ९४ मत पाएका थिए ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पनि एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पराजीतगर्दै रञ्जित विजयी भएका थिए । रञ्जितले १४ हजार ४ सय ७६ मत पउँदा एमालेका कृष्णगोपालले १३ हजार ८७ मत प्राप्त गरेका थिए । लगातार तेस्रो पटक चुनाव जितेर ध्यान ह्याट्रिक गर्ने योजनामा छन भने इतिहास रच्ने पक्षमा छन् ।
माओवादीको समेत प्रभाव रहेको यो क्षेत्रमा वामपन्थी तालमेलका कारण कृष्ण गोपाललाई बलियो उम्मेदवार ठानिएको छ । दुइ पटक चुनाव जितेर विकास गरेकोले आफूले नै जित्ने ध्यान गोविन्दको दावी छ । प्रदेश सभातर्फ कांग्रेसका इन्द्रमान तुलाधर र धर्मराज गौतम क्रमश क र ख तर्फ उम्मेदवार छन् । यस्तै बामपन्थी गठबन्धनका तर्फवाट अयजकान्ती शाक्य र केशव पोखरेल उम्मेदवार छन् । यो क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाका १२ र २१ वडा तथा नागार्जुन, चन्द्रागिरी र कृर्तीपुर नगरपालिाकाका केही वडाहरु पर्छन् ।
कात्तिक २४, २०७४ मा प्रकाशित
ओलीले तीनवटा भाषामा दिएको शुभकामनालाई नेपालीमा 'धन्यवाद' भने मोदीले
राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्षको निर्देशन - 'माथिल्लो कमिटीको अनुमतिविना निर्णय सार्वजनिक नगर्नू'
राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची